‘Parkour’ ho an’ny fandriampahalemana: Mamadika ny tontolon’ny ady ho toerana filalaovan’ny devoly ireo tanora sahisahy ao Kabul · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraGetee Ramazan Habibi
Voadika ny 01 Aogositra 2018 13:02 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, Español, polski, русский, Ελληνικά, 日本語, English
Parkour tao Afganistana. Nampiasana miaraka amin'ny alalan'i Abdul Jamil Sherzad avokoa ireo sary rehetra.
Parkour, nahita trano soa tao Kabul, renivohitr'i Afganistana ilay endrika karazana tsingolobatita an-drenivohitra izay niforona tao Frantsa. Any, ao amin'ny tanàna iray tsy nahafantatra fitsaharana herisetra sy korontana, naverin'ny vondrona tanora tena mifolapolaka tsara nalaina ilay tontolo avy amin'ny tahotra sy faharavàna, miaraka amina hetsika mipoapoaka sy hafatra miabo.
Nanana vintana hihaona amin'ilay lehilahy nitondra ny Parkour tao Afganistana ny Global Voices, i Abdul Jamil Sherzad, izay niresaka taminay mikasika ny fandriampahalemana, ratra sy ny ady amin'ny fitadiavana famasiambola mba hampiroboroboana ity fanatanjahantena mahabe fanantenana ity ao amin'ny firenena.
Global Voices: Hafiriana izay no nanaovanao ‘parkour’ ary inona no nahatonga anao hanomboka izany?
Abdul Jamil Sherzad: Nanazatra tena sy nianatra nandritra ny fito taona aho. Izaho no mpamorona ity fanatanjahantena ity eto Afganistana. Manana tanjona manokana sy nasionaly aho amin'ity fanatanjahantena ity. Raha izaho manokana aloha, nanana firehetampo hianatra zavatra hafa, manokana ary feno fihetsehana aho. Mahatonga ahy ho mafàna fo, mavitrika sy mahatoky tena ny parkour. Nanana fototra atletika teo aloha. Fahazarako ny manao tekwondo, baolina kitra ary fitness. Fa rehefa nahita ity fanatanjahantena ity aho, azoko fa tena ao anatin'ny parkour irery ihany ny hoaviko.
GV: Ahoana ny mikasika ireo tanjona nasionaly?
AJS: Manana tanjona ny haneho ny endrika tsaran'i Afganistana amin'izao tontolo izao izahay. Angatahanay ny hijeren'ny olona ireo mponina aty Afganistana, izay reraky ny ady. Ny hiainanay am-pilaminana no hany mba tanjonay. Fanirianay ny ho vonona tsara sy ho matihanina tsara mba hisoloanay tena ny faneva Afganistana any amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena amin'ny parkour ary ny handresy. Amin'ny fandraisana anjara amin'ireo hetsika iraisam-pirenena, te-hampiseho ny toe-tsaina tsara sy ny fahaiza-mitarik'ireo tanora Afgana izahay. Fanirianay ny hampiray ireo tanora ao Afganistana tsy mila fijerena ny foko na fiaviana. Fanirianay ny hanaisotra ny toe-tsaina ratsy eo anivon'ireo tanora ato amin'ny firenena, mba hanakanana ireo tanora Afganistana tsy handray zava-mahadomelina. Iriko ny hanetsika sy hanome aingam-panahy ireo tanora Afgana mba hiditra anatin'ny fanatanjahantena, indrindra ao amin'ny parkour.
Parkour ao Afganistana. Nahazoana alalana avokoa ny fampiasana ireo sary rehetra.
GV : Fa maninona ny parkour no manome aingam-panahy kokoa noho ireo fanatanjahantena hafa ?
AJS: Manazatra ny parkour, tsy amin'ny maha-fanatanjahantena azy irery ihany aho, fa toy ny fomba fiainana ihany koa. Ao anatin'ny parkour, mitsambikina ambonin'ireo sakana foana izahay. Toy izany koa ny amin'ny fiainana andavanandro, izay tena feno tolona. Ary mitovy amin'izany ihany, amin'ny maha mpitarika amin'ny parkour ahy, manana ny andraikitra amin'ny fampianarana bebe kokoa ireo tanora aho mba hiady amin'ireo sakana eo amin'ny fiainany sy hianatra ny ho feno fanantenana ao anaty fotoan-tsarotra.
GV: Tena fanamby be ve ny fampidirana fanatanjahantena vaovao taty Afganistana?
AJS: Maro ireo fanamby fa ny tena lehibe indrindra dia ny ara-bola. Tsy misy fanohanana ara-bola na avy aiza na avy aiza, na avy amin'ny fanjakana izany na avy amin'ny sehatra tsy miankina. Noho izany, tsy misy toerana azo antoka hanazaranay tena aty — efitrano fanatanjahantena ohatra — miaraka amin'ny fitaovana matihanina. Fikambanana vitsy no mba mikendry ny hampivoatra ny fanatanjahantena ary manampy ireo tanora feno famoronana mba hivoatra. Fanamby iray lehibe ireo ratra! Matetika tena mamoaka anao ivelan'ny hetsika mandritra ny andro maromaro, indraindray mandritra ny volana maro mihitsy.
GV: Firy no mpikambana ao amin'ny ekipanareo ary taiza no nifankahitanareo?
AJS: Mihoatra ny 50 ny mpikambana ary 50 ny mpianatra miofana ao amin'ny ekipako, 10 ka hatramin'ny 26 taona. Tena samy feno herim-po ary feno hery famoronana avokoa izy ireo. Nanomboka nanazatra tena tany ivelan'ny trano izahay, tany amin'ireo toerana rava izay mety hahitanay rindrindra ho toy ny sakana ary ankehitriny efa manazatra tena eny an-dalana amin'ny fampiasana ireo fefy vy fiarovana, kianja malalaka sy havoana. Tsara ho an'ny fanazarantena izany fa mila ilay efitrano fanatanjahantena izahay mba hahafahanay mampivelatra bebe kokoa ny fahaizanay. Tsy mbola manana aloha izahay hatreto.
GV: Mba manao parkour koa ve ny vehivavy sy ny ankizivavy?
AJS: Eny, tena liana amin'ny fianarana izany ny vehivavy ary misy vehivavy manaraka fampiofanana ato amin'ny ekipanay. Raha mahazo efitrana fanatanjahantena izahay, hiakatra ny isan'ireo vehivavy ireo. Mandray ny fitovian'ny lahy sy ny vavy ny Parkour.
GV: Mbola misy zavatra hafa tianao ho lazaina ve?
AJS: Eny. Rehefa niezaka ny hanatrika hetsika parkour tao Eoropa izahay, ,nolavina ny visa anay fa satria pasipaoro Afgana no teny an-tànana. Naniry ny hisolo tena ny parkour Afgana sy hiverina mba hanaparitaka ny traikefa sy ny fahaizanay ho an'ireo mponina hafa ato Afganistana izahay saingy tsy nitokisan'izy ireo. Mba te-hampita amin'ireo masoivoho sy olona any ivelany fa ny hetsiky ny vitsy dia tsy tokony hanimba ny lazan'ny besinimaro. Lasibatry ny mpanao an-tendrony fa tsy ny mpanohana azy i Afganistana. Taninà karazana fomba sy kolontsaina ary feno olona mahafinaritra be dia be i Afganistana. Mba tohano re izahay hamerina ity firenena ity ho mandroso sy tsara tarehy indray. Hajao ny maha-olona anay ary ny fahafahana mitovy no tokony ho laharam-pahamehana any amin'ny firenena an-dalampandrosoana toa an'i Afganistana.